ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေများနှင့်အညီ, ငါတို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု cookie ကိုကိုခေါ်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်အတွင်းသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ဦးစားပေးအကြောင်းကိုအချို့သောသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းထားကြလိမ့်မည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြား.
တစ်ဦးက cookie ကိုသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် website တစ်ခုစတိုးဆိုင်သင့် browser တောင်းကြောင်းမိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အချက်အလက်များ၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ cookie ကိုသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုသို့မဟုတ်ဦးစားပေးခွင့်ပြု “သတိရ” အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဝက်ဘ်ဆိုက်.
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြီးသားအားလုံး cookies များကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အားမရရှောင်ရှားရန်အများဆုံး browser များသတ်မှတ်နိုင်သည်. သို့သျောလညျး, သင်ဤကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သငျသညျကို manually သင်တစ်ဦးက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအခါတိုင်းအချို့ဦးစားပေးကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်, တချို့န်ဆောင်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ.
အများစုမှာ browser များ cookies တွေကို support, ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ browser များကျဆင်းသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အခါတိုင်းသူတို့ကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်. ကွဲပြားခြားနားသော browser များပေါ်ကြောင်းမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီရန်, aboutcookies.org လို့ခေါ်တဲ့ Third-party က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး.
တချို့က Third-party cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီးကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမဆိုမထိန်းချုပ်ဘူး. တတိယပါတီများအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားစေခြင်းငှါ၎င်း cookies များကိုပါဝင်သည်: Google Analytics-ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုဒေတာစုဆောင်းဖို့ Google Analytics သည်ကိုအသုံး. ဒီ data ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖော်ထုတ်နိုင်သတင်းအချက်အလက်များမပါဝင်ပါ. Google ကသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်: www.google.com/policies/privacy/.
သငျသညျ Portforward.com သွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ,, ကျွန်တော်ကြော်ငြာတွေအစေခံရန် Third-party ကုမ္ပဏီများသည်ကိုအသုံး. အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒီပေါ်တွင်သင်စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဖြစ်မည်အကြောင်းနှင့်မီဒီယာ၏အခြားပုံစံများအကြောင်းကိုကြော်ငြာပေးသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်. အချို့စာမျက်နှာများတွင်, ကျွန်တော်ကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန် Google AdSense ကိုသုံးပါ. ဤကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးက Google နှင့်အတူပစ်မှတ်ထားမကိုအသင့်ရဲ့ဦးစားပေးအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုအပြည့်အဝ GDPR လိုက်နာယုံကြည်. ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိလိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်ကြဘူး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို update လုပ်ကအပြည့်အဝ GDPR လိုက်နာစေရန်ယုံကြည်ခြင်း၏အကောင်းတစ်ဦးအားထုတ်မှုကိုဖန်ဆင်း. သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website လိုက်နာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုစနစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ